Anyị na-elegharakarị ohere ịzụ ahịa ndị a na-ahụ anya, anyị anaghị aga otu ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị ahụghị ha. Ahịa n’èzí na bọọdụ mkpọsa bụ otu n’ime atụmatụ ndị ahụ. Dika otutu uzo ahia ahia, enwere uzo di iche iche na ohere di iche iche nke ndi ozo apughi inye. Ma nye usoro dị ukwuu, ịloghachi na itinye ego n’ahịa nwere ike ọbụna karịa ọwa ahịa ndị ọzọ.
Billboards nwere ike inwe nnukwu mmetụta maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ niile. Na infographic a site na Signarama na Toronto, ọ na-adọrọ mmasị karịsịa ịgụ na na ụlọ ọrụ Telecom ọ bụ ya kachasị emetụta. Mara: Ọ dịkwa mma ịhụ na ụlọ ọrụ ihe ịrịba ama na-ahụ mmetụta nke infographics!
Pzọ Ntugharị - Ọ naghị ada ada na agbanyeghị ọwa anyị na-ekwu maka ya, ọ na-eju anyị anya mgbe niile na ọnụ ọgụgụ mkpọsa a na-egbu nke na-enweghị oke oku-omume. Billboard ahia bu ugbua ihe di iche! Gwakọta ozi pụrụ iche na ọnọdụ pụrụ iche yana ibe ọdịda pụrụ iche na URL dị mfe nke zoro ezo na engines ọchụchọ.